China Charmlite Sparkle Plastic Strawberry Cup na ndị nrụpụta Ikike 16oz na ndị na-eweta LED | Charmlite
Charmlite Sparkle Plastic Strawberry Cup na Ifuru LED 16oz
Iri ahihia ahihia nke eji ahihia na ahihia mee gi ihe oma. Na-a -ụ mkpụrụ osisi na-adọrọ anya, ụdị osisi ahịhịa na-eji ụdị ube na-egbu maramara, iko a na-eme ka ihe ọ yourụ yourụ gị niile dịkwuo mma. Ejiri plastik mee maka ịdị elu ya na ike ya dị elu karị, na-enye ya ike ijide mkpụrụ osisi, sọdọsh na lemonade na ice. Ọzọkwa, ịnwere ike ịgbakwunye lanyard na ezumike iji kpọgidere n'olu gị iji buru iko ahụ gaa ebe ọ bụla. Ihe kachasị mkpa bụ na enwere oche oche LED na iko dị n'okpuru ala. Ọ nwere ike jiri ọkụ na-acha n’ọkụ n’abalị. Ezigbo ụkpụrụ maka ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ụlọ mmanya, oriri na ọniụ .ụ.
• Site na ọrụ LED
• na-adigide, ihe owuwu plastik na-enweghị BPA
• imewe mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-enyere aka gbochie oghere na nfu
• Ike: 16oz
Nlele Nke: CL-ST001
Nwee OZI EGO NA-ATA EGO
TOzọ ị ga-esi mee ka ihe gị dị mma
KA EGO DARA KA EGO
Ọtụtụ ndị agwala m na ha enweghị ike ịhazi tebụl oriri, ma ọ bụ na ha abụghị ndị okike iji bulie oriri na nkwari. Ọ bụghị eziokwu! Ebumnuche anyị bụ igosi gị na CAN P CANR do ime nke a ... onye ọ bụla nwere ike! Ekebe dika osisi ahihia, iko a bu ihe ima nma. Nke kachasị mma, iko a na-abịa mkpuchi mkpuchi siri ike iji gbochie mmụba na ọgbaghara. Ọbụna ahịhịa na-agbanwe agbanwe nwere okpu iji nyere aka ọzọ belata nzere na ọgba aghara. Mgbe ndị ọbịa gị kwuchara, njikwa ya nwere ike ime ka nhicha ọcha.
Atọ ịke agba atọ maka ị na-ahọrọ: transperent iko cup body, solid cup body or steel cup body.
N’agbata usoro agba ndị a, ị nwekwara ike ime ụcha doro anya, acha uhie uhie, pink na-acha odo odo, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, edo edo siri ike, odo odo siri ike, odo siri ike, acha odo odo, kpuchie odo, wdg.
Nke dị n'elu bụ agba doro anya na arụmọrụ LED.
Nke dị n’elu bụ atụmatụ ụcha siri ike.
Elu na-acha ọbara ọbara ka a na-acha uhie uhie, imewe okomoko.
Nke gara aga: Charmlite Mpempe akwụkwọ eji acha pọpụpọ pọmpụ Ọkpụkpọ ọhụrụ na LED Funtion 16oz
Osote: Charmlite Kachasị Reusable Stemless Champagne Na-efe efe nke Sọọmpi Maka iko - 10 oz
Mmiri mkpuchi mmiri Charmlite Ndị Na-ahụ Maka Karama ...
Charmlite rọba kọfị Mug na ịghagha ụgha na ...
Akara Akpukpo Agwostoo Azụ Mkpọpu Akpọkpọli ...
Charmlite Tumbler Ọhụrụ Ndị Na - eme Elu Niile